Finland go’aanka megangelyada waxaa markasta la sameeyaan iyadoo loo sababeynayo si shaqsi ah - Asylum in Finland
Codsi megangelyo oo kasta waxaa looga baaraandegayaa goonidiisa. Marka aad codsiga dhigato kaddib habsami-socodka ka baaraandegistu waxey u soconeysaa sidan soo socota:
Hay’adda socdaalku waxey hubinaysaa in codsigaaga looga baaraandegayo Finland. Finland ma baareyso codsigaada megangelyada haddii wadanka kale oo nabad ah aad ku leedahay xuquuq deganaasho ama wadan kale uu si waafaqsan heshiiska ka dhexeeya Midowga Yurub dartiis mas’uul uga yahay ka baaraandegista codsigaada.
Haddii codsigaada looga baaraandegayo Finland, Hay’adda socdaalka ayaa kuugu yeereysa wareysiga Megangelyada, haddii loo baahdana waxey doonaneysaa cadeymo dheeraad ah oo xaaladaada ku saabsan.
Marka la baaro xaaladaada, hay’adda ayaa go’aan ka gaareysa in lagu siinayo megangelyo ama ogolaansho degitaanka oo kale ama in lagu siinayo go’aan diidmo ah.
Marka qiimeynta la sameynayo waxaa xisaabta lagu darayaa waxa aad sheegtay, caddeymaha aad soo bandhigtay, sababo gaar ah iyo caddeymaha ay ha’addu hesho. Qofka go’aanka gaaraya wuxuu hubsanayaa xaaladaada: in aad heysato sababo sharciga waafaqsan oo laguugu siiyo ogolaanshaha degitaanka iyo in aad ku noqon kartid dalkaadi. Waxaa kale oo go’aanka saameyn ku leh wadanka laga hadlayo macluumaadka xaaladiisa markaas taagan.
Waa muhiim in daacad la ahaado marka wareysiga lagu jiro
Marka lagu jiro wareysiga megangelyada waa in aad run ku hadashaa islamarkaasna si hufan u sheegtaa sababaha dartood aad Finland megangelyada uga codsaneyso.
Si ay u fududaato ka baaraandegista arrinta waxaa wanaagsan in aad wadato dhammaan caddeymaha la heli karo ee caddeynaya in waxa aad sheegeyso ay run yihiin. Hay’adda socdaalka ayaa baareysaa saxnimada macluumaadyada aad bixisay.
Hay’adda socdaalku waxey ku keydinaysaa diiwaanka ajnabiga macluumaadka muhiimka ah ee adiga kugu saabsan. Maclumaadyadan dib ayaa laga hubin karaa marka aad ka daneysaneyso hay’adaha dowladda- tusaale ahaan marka ay xubnaha qoyskaadu ka codsanayaan Finland ogolaanshaha degitaanka.
Bixinta macluumaad qalad ah ama arrimo qarintu waxey dib ka sababi karaan dhibaatooyin.Tusaale ahaan waxaa adkaan kara keenista qoyskaada Finland ama megangelyadi lagu siiyay ayaa lagaala laaban karaa.
Sii aqri: Warbixinta loogu talagalay dadka megangelyo-doonka ah (PDF)